Xhumana Nathi - Molooco
Cart / $16.90 1
ISerum Yokukhula Kwamashiya I-1 × $16.90
Inani eliphansi: $16.90
Ngifaka kanjani i-oda?
Okokuqala, vakashela isitolo sethu e UMolooco
Khetha imikhiqizo oyithandayo, bese uchofoza "Engeza ekalishini"Futhi"Hlola".
Bese ugcwalisa imininingwane yakho bese ukhokha.
Yilokho kuphela! Kulula kakhulu
Sithumela ama-oda phesheya ngensizakalo yeposi.
Ngemuva kokuphothula ukucubungula i-oda lakho, sizolithumela enkampanini yokuthumela futhi izophathwa yibo ngokuphelele. Ngemuva kokufika ezweni lakini, izosingathwa insizakalo yeposi yezwe lakini. Ngakho-ke ngicela uxhumane ngomusa neposi lakho lasendaweni lapho lifika ezweni lakho.
Yiziphi izindlela zokukhokha ezamukelwa e-Molooco?
Samukela i-Paypal, ama-debit / amakhadi wesikweletu nama-cryptocurrencies.
Sithumela emhlabeni jikelele futhi Isikhathi sethu sokuthumela sivame ukungaphakathi 7-10 izinsuku zebhizinisi eziya e-USA, futhi 12-15 izinsuku zebhizinisi kwamanye amazwe. Noma kunjalo, kungathatha kuze 20 izinsuku zebhizinisi ukuze zifike ngokuya ngendawo yakho nokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza amasiko
Sizokubuyisela ngaphansi kwalezi zimo:
* Uma izimpahla kungenzeka zilimele
* Uma i-oda lakho lingafiki ngaphakathi 45 izinsuku zebhizinisi
* Izinto ezingalungile zathunyelwa
Ngi-ode izinto eziningi hhayi zonke ezafika
Ngokuvamile sithumela izimpahla eziningi ngamaphakeji ahlukile ukugwema ukubambezeleka okude kumasiko. Lokhu kusho ukuthi bangafika ngezikhathi ezihlukile.